V – Day အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး စွဲမက်ဖွယ်ရာ Underwear အသစ်တွေကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Rihanna – FemaleWear.net
အမေရိကန်နိုင်ငံက ထိပ်တန်း အမျိုးသမီးအဆိုတော် တစ်ယောက်ဖြစ်သလို၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ Rihanna ဟာ ဒီဘက်နှစ်တွေမှာ အနုပညာအလုပ်တွေသာမက ပြင်ပစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကိုပါ အင်နဲ့အားနဲ့ လုပ်နေခဲ့တာကို အားလုံးလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အနုပညာမောင်နှမတွေအပြင် ပရိသတ်တွေကပါ ချစ်စနိုးနဲ့ RiRi လို့ ခေါ်ကြတဲ့ Rihanna ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းထဲမှာတုန်းကလည်း သူမရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုက Product အသစ်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။ အဲဒီ Product အသစ်လေးတွေက တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အသွေးအရောင်စုံလင်ပြီး ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစွာ ဆင်မြန်းနိုင်မယ့် အမျိုးသမီးဝတ် အတွင်းခံလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ RiRi ဟာ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ Underwear လေးတွေကို ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမတည်ထောင်ထားတဲ့ Savage x Fenty ဆိုတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကနေပြီး အသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တာပါ။ ပြီးတော့ ဒီ underwear လေးတွေဟာ မကြာခင်မှာ ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Valentine’s Day အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး collection အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Undies👏undies👏undies👏…cuzagirl needs options 💅| Hipster, bikini, thong, or high-waisted – drop your flavor below! 👇👙
ကမ်းခြေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ပျိုမေတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအလှ ကောက်ကြောင်းလေးတွေကို သက်သောင့်သက်သာရှိမှုနဲ့အတူ လန်းဆန်းတက်ကြွစွာ ဖော်ကျူးပေးနိုင်မယ့် product အသစ်လေးတွေကို RiRi ကိုယ်တိုင် Promotion အနေနဲ့ ၀တ်ဆင်ပြခဲ့ပြီး သူမရဲ့ Offical Instagram စာမျက်နှာပေါ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက တင်ထားခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါသေးတယ်။
ပြီးတော့ သူမရဲ့ Savage x Fenty လုပ်ငန်း Instagram စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်း V-Day Themed Collection အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Underwear လေးတွေကို ဝေဝေဆာဆာတင်ပြီး ကြော်ငြာထားတာကို တွေ့ရပြန်ပါသေးတယ်။
RiRi နဲ့ သူ့ရဲ့မော်ဒယ်တွေ ၀တ်ပြထားတဲ့ ပုံစံလေးတွေအရ ဒီ Underwear Collection အသစ်လေးတွေက ဆန့်ကျင်ဘက် အမျိုးသားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရုံတင်မကဘဲ အမျိုးသမီးအချင်းချင်းတောင် လည်ပြန်ငေးမောရလောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတာကလည်း အမှန်ပါ။
A #SavageLove is in the air! 💕The V-Day collection is selling fast…don’t get caught punching the air if you missed out! 💅
RiRi ရဲ့ ကြေငြာချက်အရ V – Day မှာ ဒီ Underwear ဒီဇိုင်းအသစ်လေးတွေနဲ့ အပြတ်လန်းချင်တဲ့ ပျိုမေတွေဟာ အခုကနေစပြီး ကြိုတင်အော်ဒါတင်လို့ရနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။ အဲ…. စီးပွားရေးပဲ လုပ်နေလို့ အခွေသစ် မထွက်တော့ဘူးလားလို့ မေးနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကိုတော့ ဒီ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထဲမှာ အခွေသစ် ထွက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းကို RiRi က အင်တာဗျူးတချို့မှာ ဖြေထားခဲ့ဖူးပါသေးတယ။ ။
Tags: Celebrity Fashion Line, Instagram, Rihanna, Underwear